Profil Aluminium, Vavahadin'ny varavarankely aluminium - Fenan
Mampanantena am-pahatokiana aho fa mpanamboatra fitaovana aluminium matihanina
Niorina tamin'ny taona 1988, ny vondrona Fujian Fenan izao dia orinasa lehibe iray manontolo, manampahaizana manokana amin'ny famokarana rafitra fikandrana aluminiana mofomamy, fantsom-batam-by tsy simika ary fanaraha-maso rindrina lamba. Miaraka amin'ny alàlan'ny Chine 5 mpanamboatra profil Aluminum 5, tarika Fenan dia manarona faritra iray
1,332,000 metatra tora-droa, trano fonenana 4 (Fujian Fenan Aluminium Industry Town, Henan Fenan Aluminium Industry Town, Fenan Window System Industrial Industrial ary Fujian Fenan Stainless Steel Production base) Fenan Group dia nanangana ny rafitra Fujian Fenan Smart W&D Co Ltd tamin'ny 20 14 ka hatramin'ny mamolavola sy hampandeha ny varavarankely Fenan & varavarana varavarana, amboarina ny O2O voalohany amin'ny fivarotana andalana ao amin'ny E-shop industri-fenan
Varavarana amorom-boron-tsoroka FOEN. Nankatoavin'ny fenitra NAMI sy AAMA. Isika dia mpikambana amin'ny American Architectural Manufacturers Association ary manome antoka 10 taona antoka. Ny fikarakarana tsara amin'ny alàlan'ny vovony dia mampiseho ny endrika tsara tarehy sy fohy. Fitaovana lohataona haingam-pandeha ambony sy ball precision mitondra ny rafitry ny roller dia mampiroborobo ny fandidiana sy ny mangina ary ny fiainana fanompoana bebe kokoa. Ny famolavolana manan-danja ho an'ny hantsana sy ny molotra dia manakana anao mitehina tanana izay tena azo antoka.
Ny efitrano fampirantiana FOEN dia mampiseho serivisy vokatra marobe izay namolavola ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny toerana isan-karazany sy ny endrika ravaka. mifantoka amin'ny varavarana fiarovana avo lenta sy Windows izahay. Nofehezina amin'ny fanidiana mihira ho an'ny filaminana bebe kokoa. Miaraka amin'ny hery ara-teknika matanjaka, ny teknolojia mandroso ary manana fitaovana be dia be, ny suite feno feno, anisan'izany ny varavarana sy ny varavarankely Bi-fold, ny varavarana mifono vy sy varavarankely, varavarana vita amin'ny Aluminum, varavarankelin'ny Awning sy Casement, Aluminum sy Glass Louvres, Fencing dobo. etc.
Fujian Foen Aluminum co. Niorina tamin'ny taona 1988, tao amin'ny tanànan'i Fuzhou any Chine, ny velaran'ny velarana 1,333,000 metatra toradroa misy mpiasa 3500. Mpanamboatra matihanina izahay any Sina izay mamokatra ny mombamomba ny aluminium, ny varavarankely aluminium sy ny varavarana varavarana, rindrina lamba ary rindrina bracket.
Ny mombamomba ny aluminium ho an'ny Sliding Door
Ny mofomamy fantsom-baravarankely Aluminum profil
Profesoran'ny indostrian'ny indostrialy ampiasaina matetika
Vondron-javamaniry loko Anodisialy loko ...
U Chanel Tube vita amin'ny Aluminium for Industrial
Profil Aluminum strukture amin'ny fitsaboana amin'ny tany
Profil aluminium ho an'ny rafitra Window sy curtain ...